यौनसम्पर्कको पृष्ठभूमि र यौन रोग - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । हाल म कतारमा छु । म यता आएको धेरै भएको छैन, मात्र २ महिना भयो । यहाँ आउनुभन्दा ६–७ दिनअघि मेरो यौनसम्पर्क भएको थियो । यहाँ आएको ५–७ दिनपछि देखि मेरो लिंग चिलाउन थाल्यो । त्यतिबेला राति सुत्न गाह्रो हुन्थ्यो । लिंगको छालामा सानो फोका देखें । मैले साह्रै चिलाएर हेर्दा धेरै होइन, एउटा मात्र थियो । २–३ दिनपछि त्यो निको भयो । निको हुनासाथ त्यसको छेउमा त्यस्तै पानीफोका देखा पर्‍यो । त्यो पनि एउटा मात्र, त्यो पनि निको भयो र अहिले त्यस्तै फोका २–४ वटा लिंगको टुप्पोको छालामा देखा परेको छ । यो पहिलेजस्तो चिलाउँदैन । तैपनि यो कुनै रोगको लक्षण हो कि ? अनि फेरि यहाँ आएपछि मौसमका कारणले पनि होला, शरीरको कुनै पनि भागमा चिलाएजस्तो भएर कन्याउँदा डाबर बस्छ । के यो मेरो लिंगमा उत्पन्न समस्यासँग सम्बद्ध छ ?
तपाईंले कतार जानुभन्दा पहिले यौनसम्पर्क गरेको त कुरा गर्नु भयो, तर तपाईंले आफूले राखेको यौनसम्पर्कका सन्दर्भमा खासै जानकारी दिनुभएको छैन । तपाईं अविवाहित भएकाले तपाईंकी श्रीमती नभएको कुरा भन्न सकिए पनि प्रेमिका छिन् कि छैनन् थाहा भएन । तपार्इंले यौनसम्पर्क राखेकी महिलाको पृष्ठभूमि के–कस्तो थियो ? कतै तपाईंले अब लामो समयसम्म विदेशमा बस्नुपर्दा यौनसम्पर्क राख्न पाइने हो कि भनेर एकपटक यहीँ यौनसम्पक राखौं न त भन्ने सोचले पैसा तिरेरै उक्त सेवा लिनुभएको त होइन ? हुन त उहाँहरूसँग हुने ग्राहकको यौनसम्पर्कलाई सक्दो सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ, तर जति धेरै व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क हुन्छ त्यति नै बढी यौनरोगको संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले देहव्यापारीहरूसँगको यौनसम्पर्कमा यौन रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अर्को कुरा, यस्ता यौनसम्पर्कमा कन्डमको सही प्रयोग नै विभिन्न यौनरोगबाट जोगिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । तपाईंले त्यतिबेला कन्डम प्रयोग गर्नुभएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि लेख्नुभएको छैन ।
तपाईंले दिनुभएको सीमित जानकारीका आधारमा यकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति त भएन,
तर यसरी पानी फोकाजस्तो आउनुको एउटा प्रमुख कारण यौनाङ्गको हर्पिस अर्थात् genital herpes हुन्छ ।
यौनाङ्गको हर्पिस एक प्रकारको यौनरोग हो । यो herpes simplex virus (HSV) अर्थात् विषाणुका कारणले हुन्छ । यी विषाणुका दुई प्रकारमध्ये प्राय: HSV-1 ले चिसो लागेको वा ज्वरो उछ्रिएका बेला ओठमा पानीफोका आउँछ भने ज्क्ष्ख्(द्द ले भने यौनाङ्गमा । यो संक्रमित व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कवाट सर्छ । संक्रमित व्यक्तिको हर्पिसको घाउ, भित्री छाला वा यौनाङ्ग तथा मुखबाट आउने रसमा यी विषाणु हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदा सर्छ । कतिपय स्थितिमा यो सामान्यजस्तै देखिने यौनाङ्ग वा मुखको बाह्य वा भित्री छालाबाट पनि सर्न सक्छ । यौन क्रियाकलापको कुरा गर्दा योनि–लिंग यौनसम्पर्क, मुख मैथुन वा गुदा मैथुन जस्ता यौनसम्पर्कको माध्यमबाट सर्छ । यो विषाणु संक्रमित व्यक्तिको थूक, वीर्य तथा योनिरसमा पाइन्छ ।
लक्षणको कुरा गर्दा कतिपयमा त लक्षण नै नदेखिन सक्छ । लक्षण देखिँदा भने एक वा दुई पानी फोका वा स–साना पानीफोकाहरू आउँछन् त्यो पनि यौनाङ्गमा । माथी भनिएजस्तै प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको स्थानमा आउने भयो अर्थात् गुदा मैथुन भएको भए गुदद्वार त्यसैगरी मुखमैथुनमा मुखमा । यौनसम्पर्क भएको यस्तै चार दिनपछि लक्षण देखिन्छ, तर यो चाँडोमा दुई दिन भने धेरैमा १२ दिन वा त्यसभन्दा पछि पनि देखिन सक्छ । सुरुमा पानीफोका देखिनुभन्दा पहिले चिलाउने वा झमझम गर्ने हुन्छ । पानीफोका देखिन्छ र त्यो पछि फुट्छ अनि रस पनि बाहिर आउँछ । यो दुख्ने घाउमा यस्तै हप्ता दिन जतिमा पाप्रा बस्छ र त्यसपछि बिस्तारै निको भएर जान्छ । त्यसबाहेक जीउ दुख्ने, टाउको दुख्ने वा लसिका ग्रन्थि बढ्ने जस्ता लक्षण पनि देखिन्छन् ।
प्राय: चिकित्सकले परीक्षणबाट सजिलै यसको निदान गर्न सक्छन् । यदि हर्पिस हो भन्ने पक्का भए बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो निको भने हुँदैन, तर यसलाई व्यवस्थित वा कम गर्न सकिन्छ । प्रतिविषाणु औषधीको सेवनले यसको लक्षणलाई कम गर्छ । हल्का मनतातो पानीले नुहाउँदा, घाउ भएको स्थान सफा राख्दा तथा खुकुला पहिरन लगाउँदा सजिलो हुन्छ । यसमा पीडा कम गराउने औषधीसमेत सेवन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यौनरोग सर्न नदिन यौनसम्पर्क नै नगर्नु एउटा उत्तम उपाय हो, तर यो व्यवहारिक नहुन सक्छ । यसको संक्रमण नभएका दुई व्यक्तिबीचमा मात्र यौन सम्पर्क गर्दा पनि यो सर्दैन । यसलाई सर्न नदिन सहि तरिकाले नियमित कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मौसमका कारणले हाम्रो छालाको स्वास्थ्यमा असर पर्छ । यसको प्रभाव यौनाङ्गभन्दा अन्य अङ्गका छालामा देखिन्छ । तपाईंलाई थाहै होला कि यौनाङ्ग क्षेत्रमा बढी तापक्रम तथा बढी आद्रता भए ढुसीको संक्रमण (fungal infection) हुन सक्छ ।
डाबर वा डाबरा विशेष गरेर एलर्जीको कारणले आउँछ । यस्ता एलर्जीको कारण अनेक हुन सक्छन् । के–कस्तो वस्तुको सम्पर्कमा आउँदा वा वातावरणमा बस्दा डाबर आउँछ भन्ने कुरा आफैले याद गर्नुपर्छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये एक थरीलाई physical urticaria भनिन्छ र यो विशेष गरेर चिसो, तातो, घाम, कम्पन, दबाब, पसिना तथा व्यायामजस्ता कारणले हुन्छ । यसको पनि एउटा प्रकार हुन्छ जसमा छालामा कन्याउँदा वा दबाबसहित स्पर्श हुँदा बिमिरा आउँछ, जसलाई dermatographism भनिन्छ ।